Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IKrisimesi eBiltmore House ngoku Vula
Namhlanje kuphawula ukuvulwa kombhiyozo weholide yezindlu zikaBiltmore, iKrisimesi eBiltmore. Esi siko sisukela emva kwiminyaka eyi-125 eyadlulayo xa uGeorge Vanderbilt wayebhiyozela iKrisimesi yokuqala kunye nosapho kunye nabahlobo kwikhaya lakhe elitsha - iBiltmore House. Iindwendwe ziyamenywa minyaka le ukuba zizonwabele ubumnandi beholide kwifa. Eyodwa kulo nyaka lithuba lokuba namava kaVan Gogh Alive ethiwe thaca ngamava eGrande, owokuqala kwemithathu imiboniso yobugcisa bedijithali eneemvakalelo ezininzi kuthotho oluthatha unyaka wonke.
Biltmore House ubungangamsha
I-Décor e-Biltmore House ibandakanya imithi yeKrisimesi ehonjiswe ngesandla engama-62, ngaphezulu kwe-14,000 yokuhombisa, izibane zeeholide ezingama-45,000, amakhandlela angama-250, i-1,000 yeenyawo zegarland, kunye ne-175 poinsettias. Imihombiso ilinganiswe ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu ukuze kuguqulwe indawo efana neBiltmore ibe ngamava abalaseleyo unyaka nonyaka.
Amava amabini ayafumaneka ukonwabela iBiltmore ngexesha leholide- iKrisimesi eBiltmore kunye neCandlelight Christmas Evening. Indawo yonke ivulelekile kwiindwendwe njengenxalenye yokungeniswa nokuba ngamava eKrisimesi.
IKrisimesi kumbhiyozo wemini yaseBiltmore, ngoNovemba 5, 2021 – 9 Jan. 2022
Esi siko sibandakanya ukhenketho lwemini yeBiltmore House ngelixa ifa lihonjiswe ngemihombiso yeeholide emanani ngamawaka.
Ukukhanya kweKhandlela ngorhatya lweKrisimesi, ngoNovemba 5, 2021 - 8 Jan. 2022
I-Biltmore House ikhanya ngekhandlela kunye nokukhanya komlilo ngexesha lokhenketho lwasebusuku, itshintsha isimo sengqondo kunye namava otyelelo lwasemini. Iimvumi ezimiswe kwindlu yonke zenza iintandokazi ngamaxesha athile onyaka.
"Van Gogh Alive" umboniso wobugcisa bedijithali
Inxalenye enye yochungechunge lobugcisa bedijithali unyaka wonke e-Biltmore, Iintsomi ze-Art & Innovation, zihambelana nokuqala kwexesha leholide kunye nokuvulwa kweVan Gogh Alive evezwe ngamava eGrande. Ibanjelwe kwiziko leminyhadala lika-Biltmore, e-Amherst e-Deerpark, kwaye isebenza nge-5 kaMatshi ka-2022, la mava aneemvakalelo ezininzi kukuntywiliselwa kubomi obumangalisayo bukaVincent van Gogh ngokukhanya, umbala, isandi kunye nevumba.
Amanqaku aphambili eHolide kumhlaba wendawo: Ivenkile entsha yeKrisimesi ephumayo, iiwayini ezikhutshwa kancinci, ukukhanya okukhulu kunye nokunye.
Imisebenzi yeholide ifumaneka kulo lonke ilifa. Ngaphakathi kweConservatory kukho iipoinsettias, amaryllis, iKrisimesi cactus, ibromeliads, iiorchids, iinyibiba zoxolo, nokunye. Iigadi zasebusika ze-estate kunye neekhilomitha zeendlela ezinokuthula nazo ziyafumaneka ukuze zihlolwe.
Ilali yase-Antler Hill inikezela ngembonakalo evela eSanta ngemifanekiso kunye nokuva uluhlu lweminqweno kunye noludwe lweminqweno kaNovemba 6 ukuya kuDisemba 23. Njengoko ngokuhlwa kuwela kwilali yase-Antler Hill, intlaninge yezibane zeeholide zikhanyisa imithi, izakhiwo, itonela yeWinery kunye neendlela zokuhamba. Ivenkile yeKrisimesi enento yonke efunekayo ukubhiyozela ixesha lonyaka.